ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအမှုဆောင်တစ်ဦး လေဖြန်းသဖြင့် ‌အကျဉ်းထောင် ဆေးရုံတင်ထားရ - Myanmar Pressphoto Agency
အင်းစိန်ထောင်အတွင်းဖမ်းဆီးခြင်းခံထားရသည့် ဒဂံုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမှအမှု‌ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မဝတ်ရည်အောင်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ရက်နေ့တွင် လေဖြန်းသဖြင့်အင်းစိန်‌ထောင်တွင်းဆေးရုံတင်ထား ရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ၂၄ရက်နေ့တွင် မဝတ်ရည်အောင်သည် သွေးတက်ပြီး‌ေလဖြန်းသည့်အတွက်ထောင်တွင်းဆေးရုံတင်ထားရ‌ေသာ်လည်း ၆ရက်အကြာတွင်မှ မိသားစုသည် ရှေ့နေမှတဆင့်သိရှိခဲ့ရကြောင်းနီးစပ်သူများကဆိုသည်။
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူကိုမင်းဟန်ထက်က”ဖြစ်တာကို အကျဉ်းထောင်ကနေ မိသားစုကိုအကြောင်းကြားတာမရှိဘူး။သိရတာကသူ့ရဲ့ရုံးချိန်းတွေမှာသူရုံးချိန်းမထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုပြီးရှေ့နေကမေးတော့မှသိရတာ။သိရတဲ့အချိန်မှာနောက်တောင်နောက်ကျနေပြီ” ဟုဆိုသည်။
မဝတ်ရည်အောင်၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ထောင်တွင်းဆေးရုံနှင့်လုံလောက်မှုမရှိသဖြင့်ပြင်ပဆေးရုံများတွင်ကုသရန် ပြောကြားထားသော်လည်း အကျဉ်းထောင် အာဏာပိုင်များ အနေဖြင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ ရွှေ့ဆိုင်းနေသည်ဟုသိရသည်။
မဝတ်ရည်အောင်သည် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလရက်နေ့ ၁၄ရက်နေ့က ၎င်း၏ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ နေအိမ်တစ်ခုတွင် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
#ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ #အမှုဆောင်တစ်ဦး #အကျဉ်းထောင်ဆေးရုံတင်‌ထားရ #MPA
Arrested Dagon University Students Union Executive Got Swollen and Hospitalized in Prison
Ma Wut Yi Aung, an Executive of Dagon University Students Union, who was arrested in Insein prison got swollen and was hospitalized at Insein prison hospital on December 24.
Even though Ma Wut Yi Aung was hospitalized on high blood level and swells, her family only learned of the incident after six days throughalawyer.
Chairman of Dagon University Students Union, Ko Min Han Htet said, “The family wasn’t notified of the incident. In was only learnt when the lawyer asked why she was unable to show up for court appointment. It was way too late already by the time it was learnt”.
The current condition of Ma Wut Yi Aung is not enough with in-prison hospital equipment and even though they have asked for treatment outside the prison, prison authorities keep postponing giving various excuses.
#DagonUniversityStudentsUnion #anExecutive #HospitalizedinPrisonHospital #MPA
Tags: DagonUniversity InseinPrison MPA Myanmar News Politics Student
Previous: မဝင်းမန်းသန်းကို နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု၊ မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုများဖြင့်ထောင်ဒဏ်၆နှစ်ချမှတ်
Next: မန္တလေး စစ်ကြောရေးအတွင်း ဗကသ ကျောင်းသားအချို့ နှင့် လူငယ်များ စအိုအတွင်း ဝါးလုံးထိုးထည့်‌ပြီး နှိပ်စက်ခံရ